SONATA-CANTATA: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဖွားမြင်တော်မူသည့် ခုနှစ်
စာလာမဖတ်ဖြစ်တာ ကြာသွားခဲ့တာကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်..။ ဘလော့ပေါ်ရောက်တာနဲ့ သိမှတ်စရာတွေ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာရပါတယ်
ဖွားတော်မူနှစ်က ဘာလို. နေက်ကျပြီး၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံနှစ်က ဘာလို. စောနေတာလဲ။
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ခရစ်နှစ်ဆိုတာက “ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးနောက်” ဘယ်နှစ် ခုနှစ်လို့ ရေတွက်တာပါ။ အေဒီ A.D (Anno Domini) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဘီစီ (BC) ဆိုတာက “ခရစ်တော်မပေါ်မီ” (Before Christ) သို့မဟုတ် “ခရစ်နှစ်မတိုင်မီ” ကို ပြောတာပါ။ ဥပမာ ဖွားတော်မူနှစ် ဘီစီ ၆၂၃-ခုနှစ်ဆိုတာက မြတ်စွာဘုရားက ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၆၂၃-နှစ်မှာ ဖွားမြင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတာက ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၅၄၃-ခုနှစ်ပါ။ BC ခုနှစ်တွေက ဂဏန်းကြီးလေ ပိုပြီး စောလေပါ။ ခရစ်တော် ပေါ်ပြီးနောက် ရေတွက်တဲ့ (AD) ခရစ်နှစ် ကတော့ ဂဏန်းကြီးလေ နောက်ကျလေပေါ့။
ခရစ်ယာန် မဟုတ်သူအချို့က “ခရစ်တော်” ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ AD, BC စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရှောင်ချင်တဲ့အတွက် “ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးနှစ်၊ ခရစ်နှစ်” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ အစား CE အများသုံးခုနှစ် (Common Era)လို့ သုံးပြီး၊ “ခရစ်တော်မပေါ်မီ” လို့ သုံးမယ့်အစား BCE အများသုံးနှစ် မတိုင်မီ (Before Common Era) လို့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါပဲ သီတာရေ... သုတရသ စာပေများများ သီတာ့ဘလော့ကနေ ကော်ပီကူးပြီး သိမ်းထားခွင့်ရခဲ့လို့လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
တန်ဖိုးရှိလွန်းတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ သိခွင့်ရတာ ကျေးဇူးပါဆရာ
mgloser no2 said...
Thank yoy very much for your precious informations. Let me share and copy to use in my life.